Videoscribe ကိုသုံး၍ whiteboard animation များ ဖန်တီးခြင်း | Myanmar
Enroll for just $49.00
မိမိကိုယ်ပိုင် whiteboard animation ရုပ်ပြဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးလို့ ရမယ့်နည်းလမ်း ကို သင်ယူချင်ပါသလား။
သင်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုပြောပြမယ့် သင်ခန်းစာက သင့်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ဗီဒီယိုဖန်တီးထုတ်လုပ်ချင်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်စီးပွားရေးအတွက် ကြောငြာချင်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စာသင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်မယ့် ရုပ်ပြဗီဒီယိုတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VideoScribe software က သင့်ကို ကူညီပေးမှာပါ။ အခုပြောပြပေးသွားမှာကတော့ ရုပ်ပြဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကစပြီး ကိုယ်တိုင်ရုပ်ပြဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
ဒီ project-based သင်ခန်းစာက သင်ယူရင်း တဖက်မှာလည်း လက်တွေ့လေ့ကျင့်ချင်တဲ့ begineer တွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာအပြီးမှာတော့ တကယ့်အလုပ်ခွင်မှာ အသုံးချရင်း သင့်ကို လူအထင်ကြီးသွားရလောက်အောင် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ရုပ်ပြဗီဒီယိုတွေ ဖန်တီးတတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့ VideoScribe အသုံးပြုနည်းကို သင်ယူသင့်တာလဲ။
· Marketing ဗီဒီယိုများ၊ ကြော်ငြာဗီဒီယိုများ ဖန်တီး၍ရခြင်း၊
• မိမိလုပ်ငန်းအကြောင်းကို လူအများ အလွယ်တကူနားလည်သိမြင်စေရန် ရုပ်ပြဗီဒီယိုများ ဖန်တီး၍ရခြင်း၊
• ပေါ့ပါ့ပါးပါး အများစိတ်ဝင်စားမည့် ပညာပေးဗီဒီယိုများ ဖန်တီး၍ရခြင်းတို့ကြောင့် VideoScribe အသုံးပြုနည်းကို သိထားခြင်းက အလွန်ပဲအကျိုးရှိပါတယ်။
· ပထမဆုံးသော သင့်ကိုယ်ပိုင် VideoScribe Project ကိုစတင်ဖန်တီးခြင်း၊
• ဖန်တီးမှု အပြင်အဆင်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊
• VideoScribe တွင် ပါရှိသော Tool များကို အသုံးပြုနည်းများ၊
• ရုပ်ပုံများ၊ လူပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများကို ထည့်သွင်းခြင်း၊
• ရုပ်ပုံများ၏ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္ဍန်၊ ပုံစံနေရာချခြင်းများကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ယူခြင်း၊
• ရုပ်ပုံများကို လှုပ်ရှားနေဟန် ပြုလုပ်ခြင်း၊
• စာသားထည့်သွင်းခြင်းနှင့် နေရာချခြင်း၊
• ကင်မရာအနေအထားချိန်ကာ ဇာတ်ကွက်အသစ်ဖန်တီးခြင်း၊
• နောက်ခံသီချင်းနှင့် နောက်ခံစကားပြောထည့်သွင်းခြင်း၊
• Scribe file အား HD quality ရအောင် ထုတ်ယူခြင်း၊
• အစအဆုံး ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးအား ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်း နှင့် အခြားသော သင်ခန်းစာများစွာပါရှိပါတယ်။
ဘာလို့ ကွန်တော်တို့ဆီမှာ သင်ယူသင့်တာလဲ။
ဒီသင်ခန်းစာက အခုမှဗီဒီယိုစလုပ်ချင်တဲ့ beginer အတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိလို့ မေးချင်တာ၊ သိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိလာတဲ့အခါ comment မှာ ပေးပို့ရေးသားရုံနဲ့ ကွန်တော်တို့ဘက်က ပြန်လည်ဖြေကြားပေးဖို့အသင့်ရှိနေမှာပါ။ ကွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သင်ယူသူတွေတကယ်နားလည်သဘောပေါက် တတ်မြောက်သွားဖို့ အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ အသင့်ပါ။
သင်တန်းတက်ပြီး အဆင်မပြေတာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါက ရက် ၃၀ အတွင်း သင်တန်းကြေး အပြည့်ပြန်အမ်းပါမည်။
Course Investment Fee- 69, 000 Kyats
About Software and Installation Guide (10:27)
How to learn (4:17)
Welcome Message from instructor (5:56)
Overview of the class (4:45)
Facebook Whiteboard Animator Group
Remote Support to Students (4:25)
2. VideoScribe Environment and Set Up
1.Startup Screen (9:40)
2.Graphical User Interface (9:56)
3. Whiteboard Animation Basics
1. Changing the Default Drawing Hand (4:43)
2. Canvas Color and Texture (2:47)
3. Adding the First Image and Adjusting It (10:25)
4. Image Properties (17:02)
5. Adding Text (5:46)
6.Exporting Video (20:07)
Project 1 - Fit to Screen
7. Project 1 - Personal Introduction (0:18)
8.Project-1 Preview (1:53)
9. Project-1 Solution (19:28)
4. Camera Settings, Transitions and Timeline Edits
1.Adjust Camera Settings (16:30)
2.Timeline and Copy,Paste Method (4:17)
3. Drawing Without Hand Leaving the Screen (5:50)
4.The Move In Effect (5:23)
Project2- Promotional - Informational Video (1:38)
6.Project-2 Part-1 (30:02)
7.Project-2 Part-2 (10:48)
8.Project-2 Part-3 (20:35)
9.Project-2 Part-4 (9:11)
10.Project-2 Part-5 (19:42)
Assignment-2_Smart City (1:52)
5. Charts, Graphs, Colors and More Effects
2.Eraser Effect (4:29)
3.How to fix error in eraser effect (3:21)
4.Color Match (8:50)
5.Graphic Filters (15:06)
Project3(1:46)
Project-3 Solution (22:44)
1.GIF files in videoscribe (10:55)
2.Making our own gifs (6:30)
3.Download and Install Inkscape (3:51)
4.Covert images into svg files (10:29)
5.Draw two images simultaneously (7:19)
6.How to draw Japanese word in videoscribe (12:19)
7.Myanmar Font Solution (34:30)
8.Morph Effect (9:49)
Webinar_as of 24/04/2020 (50:24)
7. Real World Projects Putting It All Together
1.Equipement for your production (9:32)
3.Voice Recording (13:33)
4.Videoscribe Part-1 (39:20)
5.Videoscribe Part-2 (26:46)
6.Videoscribe Part-3 (44:33)
7.Videoscribe Part-4 (16:49)
Project-5 Final Production (3:41)
Project-5 Solution (19:15)
CAMTASIA 2019 Portable Software
How to preview svg files in Window (5:09)
Window-7 whitescreen error (8:12)
Publishing Error (9:22)
How to import table and charts into VS (17:40)
Question and Answer for Newbies
Updated Advanced Lessons in June
1.About future learning and intro (4:01)
2.How to add text gifs from Camtasia (6:29)
3.Adding shapes from Camtasia and Import Gif (7:04)
Foundation Lessons for learning Revit Architecture
SketchUp: Interior Modeling Course
Start Today & Become an Expert in Days!
ArchiCAD BIM Training(Basic to Intermediate Class)